खेलकुद – Page5– shubhabihani
Home / खेलकुद (page 5)
अल्बानियालाई हराउँदै फ्रान्स नकआउट चरणमा
२ असार, काठमाडौं । खेलको अन्त्यतिर एन्टोनी ग्रिजम्यान र दिमित्री पयेटले गरेको गोलको मदतमा अल्बानियालाई हराउँदै फ्रान्स युरो कप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
बिहीबार विहान भएको खेलमा आयोजक फ्रान्सले अल्बानियालाई २-० गोल अन्तरले हराएको हो । लगातार दोस्रो जितसँगै फ्रान्स अन्तिम १६ मा स्थान बनाउने पहिलो टोली बनेको छ ।
फान्सेली प्रशिक्षकले आफ्ना दुई स्टार ग्रिजम्यान र पल पोग्बोलाई बेच्नमा राखेका थिए । पहिलो खेलमा उत्कृष्ट गोल गरेका पयेटलाई आक्रमणको जिम्मा दिए ।
तर, अल्बानियाको डिफेन्सका अगाडि फ्रान्सलाई निकै अाक्रामक खेल प्रस्तुत गर्‍यो । पोग्बा पहिलो हाफको अन्तिममा मैदान प्रवेश गरे भने ग्रिजम्यान ६८ औं मिनेट ।तर, गोलका लागि भने घरेलु टोलीले अन्तिम मिनेटसम्म कुर्नु परेको थियो ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेल सकिन एक मिनेट मात्र बाँकी छँदा फ्रान्सका ग्रिजम्यानले गोल गरे । थपिएको अतिरिक्त सात मिनेटको अन्त्यतिर पयेटले गोल गरे र फ्रान्स २-० ले विजयी भएको छ ।
यसअघि दोस्रो हाफको सुरुमा नै अल्बानियाको प्रहार पोष्टमा लागेको थियो भने ग्रिजम्यानले विस्थापित गर्नु अघि ओलिभर जिरउडको प्रहार पनि बारमा लागेको थियो ।
काठमाडौं: कोपा अमेरिका अन्तरगत आज बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभियालाई ३-० ले पराजित गरेको छ।
बोलिभियामाथि सहज जित निकालेको अर्जेन्टिना समूह ‘डी’ का तीनै खेल जितेर समूह बिजेता बन्दै नौ अंकका साथ अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिकाको क्वार्टरफाइनलमा पुग्न सफल भएको हो।
अर्जेन्टिनाको सहज जितका क्रममा खेलको १३ औं मिनेटमा पाएको फ्री किकलाई एरिक लमेलाले जाली चुमाएका थिए । उनले डी बक्सभन्दा बाहिर करिब २५ यार्ड टाढाबाट हानेको बल बोलिभियाको पर्खाल चिर्दै जाली चुम्न पुगेको थियो।
कप्तान लियोनेल मेसीलाई पहिलो हाफ बेन्चमा राखेको अर्जेन्टिनाले पहिलो गोल गरेको दुई मिनेटमै अर्को गोल थप्यो।उसका लागि पिएसजीका स्ट्राइकर लाभेजीले १५ औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए।
त्यसपछि खेलको ३२ औं मिनेटमा लाभेजीले पोस्टतर्फ हानेको बललाई भिक्टोर क्युएस्टाले जालीतर्फ छिराउन सफल भए। दोस्रो हाफको शुरुवातमै गोन्जालो हिग्वाइनको स्थानमा छिरेका कप्तान लियोनेल मेसीले भने स्कोर गर्न सकेनन्।
समूह चरणको पहिलो खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन चिलीलाई २-१ ले हराएको अर्जेन्टिनाले दोस्रो खेलमा पनामालाई ५-० गोल अन्तरले पराजित गर्न सफल भएको थियो।
आजै भएको यही समूहको खेलमा चिलीले पनामालाई ४-२ ले पराजित गर्दै समूहमा दोस्रो स्थान पक्का गरी कोपा अमेरिकाको क्वार्टफाइनलमा पुग्न सफल भएको थियो।
Watch WWE ExtremeRules 2016 5/22/16 Online
मेस्सीको प्रेरणामा बार्सिलोनाले जित्यो कोपा डेल रेको उपाधि
१० जेठ, काठमाडौं । लिओनल मेस्सी प्रेरित बार्सिलोनाले सेभियालाई परजित गर्दै कोपा डेल रे कपको उपाधि जितेको छ । बार्सिलोनाका लागि यो कोपा डे रेको २८ औं उपाधि हो । साथै उसले यो सिजन स्पेनिस दुई उपाधि ला लिगा र कोपा दुबै जितेको छ ।
सोमबार विहान भएको फाइनल भिडन्तमा १० खेलाडीमा सिमित बार्सिलोनाले अतिरिक्त समयमा गरेको गोलको मदतमा सेभियालाई २-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
खेलमा बार्सिलोना ३६ औं मिनेटमा नै १० खेलाडीमा सिमित भएको थियो । उसका जाभियर मासेरानोले रातो कार्ड पाए ।
तर, बार्सिलोनाले रक्षात्मक खेेलेन । पहिलो हाफसम्म सर्जिओ बुस्केट सेन्टर ब्याकमा आए । त्यसपछि मिडफिल्डर राकिटिकले म्याथुलाई अर्को सेन्टर ब्याक जेरार्ड पिकेसाग सहकार्य गर्न दिए र बार्सिलोनाका तीन फवार्ड मेस्सी, स्वरेज र नेयमार मैदानमै रहे ।
निर्धारित समयको खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो । अन्तिमतिर सेभियाका बानेगाले पनि रातो कार्ड पाए र दुबै टीम १० खेलाडीमा सिमित रहृयो ।
थपिएको ३० मिनेटको खेलमा भने बार्सिलोना हाबी भयो । ९७ औं मिनेटमा डेभिड अल्बाले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाए । मेस्सीले दिएको उत्कृष्ट पासमा उनले सहज गोल गरे ।
खेलको अन्त्यतिर सेभियाका कारिको मार्टिनले पनि रातो कार्ड पाए । लगतै नेयमारले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई २-० को जित दिलाए ।
विराटनगरः त्रिभुवन आर्मी क्लब पाँचौं मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
मोरङको उर्लाबारी स्थित प्रस्तावित शालबारी रंगशालामा बिहीबार भएको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलमा पाहुना टिम भारतको कञ्जनजंघा फुटबल क्लबमाथि आर्मीले स्पष्ट जित निकालेको हो ।
गोल्डकपमा पहिलो पटक सहभागि भएको आर्मीले ४–० गोल अन्तरले कञ्चनजंघालाई निराश बनाउँदै सनसनीपूर्ण जित निकालेको हो । आर्मीले मध्यान्तर अघि र पछि दुई–दुई गोल गरेको थियो ।
नवयुग श्रेष्ठको ह्याट्रिकसँगै आर्मी सहज जित निकालेको हो । खेलको १५ औँ मिनेटबाट गोलको वर्षा सुरु गरेको थियो । टंक बस्नेतले मिलाइदिएको बललाई १५ औँ मिनेटमा नवयुगले गरेको प्रहारले जाली चुम्दा खेलमा आर्मीले अग्रता लिएको थियो ।
खेलको सुरुदेखिनै दबावमा परेको कञ्चनजंघाले एउटा पनि जवाफी गोल फर्काउन सकेन । आर्मीका स्ट्राइकर भरत खवासको १७ औँ मिनेटमा गोल गर्ने अवसर प्राप्त गरे पनि उनको प्रहारले पोष्ट देख्न सकेन ।
खवासका लागि २० आंै मिनेटमा टंक बस्नेतले गोल गर्ने अर्को अवसर जुराइदिएपनि कञ्चनजंघाका गोलरक्षक नाम्तु मुजुम्दारले विफल पारिदिए ।
कञ्चनजंघाले २५ औँ मिनेटमा खेललाई बराबरीमा पु¥याउने राम्रो अवसर गुमायो । राज सुब्बाको हेड प्रहार आर्मीका गोलरक्षक सुशील श्रीवास्तवले विफल पारिदिँदा कञ्चनजंघा चुक्यो ।
४० औं मिनेटमा सन्तोश तामाङको फ्रि किकको मद्दतले आर्मीका कप्तान भरत खवासले गोल गर्दै आप्mनो टिमको अग्रता दोब्बर बनाए ।
दुई जना अफ्रिकन खेलाडीसहित मैदानमा उत्रिएको कञ्चनजंघाले मध्यान्तरपछि पनि सुधारिएको प्रदर्शन गर्न सकेन ।
आर्मीको पनि स्ट्राइकर नवयुग र भरत खवासको पटक–पटकको प्रहार असफल भयो । ६४ औँ मिनेटमा नवयुगको प्रहार पोलमा ठोक्किएर फर्किएको रिबाउण्ड बललाई विमल रानाले नियन्त्रणमा लिएर अर्को प्रहार गर्दा आर्मी ३ गोलले अघि बढ्यो । ८४ औँ मिनेटमा नवयुगले चौथो गोल थपेर आर्मीको जित सुनिश्चित गराए ।
प्रतियोगिताको म्यान अफ दी म्याच त्रिभुवन आर्मी क्लबका कप्तान भरत खवास घोषित भए । आर्मीले शनिबारको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा बीआरसी भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । शुक्रबारको पहिलो सेमिफाइन खेल आयोजक मदन भण्डारी स्पोटर््स एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
ओलम्पिकमा छनोटबिनै आफूखुसी खेलाडी
फेरि पनि एनओसीको मनोमानी
काठमाडौं: अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले फेरी पनि छनोट प्रतियोगिता बिना नै आफूखुसी नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पठाउन लागेको पुष्टि भएको छ। त्यसले अन्य प्रतिभावान खेलाडीमाथी अन्याय त भएकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बेईजत हुने खतरा पनि बढेको छ।
एनओसीले यसै बर्षको ५ देखी २१ अगष्टमा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा हुन लागेको ओलम्पिक खेलकुदमा एथलेटिक्सका दुई खेलाडीलाई सहभागी गराउँदै छ। जसमध्ये महिलातर्फ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत निक्कै कमजोर प्रदर्शन गरेकी खेलाडीलाई पठाउन लागिएको छ। एनओसीले रियो ओलम्पिकमा महिलातर्फ संगिता खड्का र पुरुषतर्फ पाँच हजार मिटर दौडमा त्रिभुवन आर्मी क्लबका हरि रिमालको नाम पठाएको छ।
एनओसीले रिमाललाई नेपाल एमेच्योर एथलेटिक्स संघको सिफारीसमा ओलम्पिकमा पठाउन लागेको हो। तर संगितालाई भने एनओसीले आफ्नै खुसीमा ओलम्पिकमा पठाउन लागेको छ। रियो ओलम्पिकमा संगिताले प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन् भन्ने बारे एथलेटिक्स संघलाई समेत जानकारी छैन।
संगिताको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा निक्कै कमजोर प्रदर्शन छ। ओलम्पिक छात्रबृत्तीमा अभ्यास गरिरहेकी आर्मी स्कुलकी संगिताले हालै भारतको सिलोङ र गुवाहाटीमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का लागि छनोट प्रतियोगितामा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। तर उनी शीर्ष तीनभित्र पनि पर्न सकिनन्।
साग खेलको छनोटमा समेत राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेकी संगितालाई एनओसीले राम्रा खेलाडीलाई पाखा लगाउँदै ओलम्पिकमा सहभागी गराउन लागेको हो। चिनमा भएको यूथ ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेकी संगितासँग सिनियर स्तरका ठूला प्रतियोगिता खेलेको अनुभवसमेत छैन। आफूलाई समेत जानकारी नदिई संगितालाई ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागी गराउने निर्णय भएको थाहा पाएपछि एथलेटिक्स संघका पदाधिकारी नै असन्तुष्ट बनेका छन्।
एनओसीले रियो ओलम्पिकका लागि एथलेटिक्स संघलाई १२ औं साग खेलकुदमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा एक पुरुष खेलाडीको नाम पठाउन पत्राचार गरेको थियो। सोही अनुसार संघले रियो ओलम्पिकका लागि १२ औं सागमा सहभागीमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हरि रिमाललाई सिफारीस गरेको हो।
हरिले १२ औं सागको पाँच हजार मिटर दौडमा कांस्य पदक जितेका थिए। ओलम्पिकमा पठाउने महिला खेलाडीबारे भने संघलाई केही सोधिएको थिएन। संघका महासचिव सुनिल राजवंशीले महिला खेलाडी बारे आफूहरुसँग नसोधिएको बताए।
साग खेलको छनोटमा समेत राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेकी संगितालाई एनओसीले राम्रा खेलाडीलाई पाखा लगाउँदै ओलम्पिकमा सहभागी गराउन लागेको हो।
‘एनओसीले हामीलाई पुरुष खेलाडीको मात्र नाम पठाउन भनेको थियो। उनीहरुले भने अनुसारको मापदन्ड अनुसार हामीले हरिको नाम पठाएका हौं’, महासचिव राजवंशीले भने, ‘महिला खेलाडीको बारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएन।’
एनओसीले ओलम्पिकका लागि महिलातर्फ संगिता र पुरुषतर्फ हरिको नाम यसअघि नै पठाइसकेको छ। यद्यपि एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलाडीको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको प्रतिकृया दिए। ‘पुरुषतर्फ हरिको नाम आएको छ तर, खेलाडीको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
एनओसीकै महासचिव लामा टेन्डी शेर्पाले भने ओलम्पिकमा पठाउने एथलेटिक्स खेलाडीको नाम टुंगो लागिसकेको जानकारी दिए। ‘रियो ओलम्पिकका लागि एथलेटिक्सबाट एक पुरुष र एकजना महिला खेलाडीको नाम तय भइसकेको छ’, सहासचिव शेर्पाले भने।
अन्तर्राष्ट्रि ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले छनोट प्रतियोगितामा आवश्यक समय (क्वालिफाईङ टाईम) पूरा गर्न नसकेका सबै देशलाई दुई खेलमा दुईदुई खेलाडी सहभागी गराउन बिशेष कोटा दिने गर्छ, जुन वाईल्ड कार्डभन्दा फरक कोटा हो। एनओसीले सोही कोटामार्फत संगिता र हरिलाई ओलम्पिकमा पठाउन लागेको हो।
स्रोतका अनुसार संगितलाई एनओसीले कुनै पनि अवस्थामा रियो ओलम्पिकमा सहभागी गराउने भएको छ। ‘रियो ओलम्पिकका लागि एथलेटिक्समा नेपालबाट संगिता र हरिको नाम गइसकेको छ’, स्रोत भन्छ, ‘एनओसीले संगितालाई जुनसुकै अवस्थामा पनि रियो ओलम्पिकमा सहभागी गराउने छ।’
एनओसीले आफुखुसी खेलाडी पठाउन एथलेटिक्स संघलाई छनोट प्रतियोगिता गर्ने अवसर समेत दिएन। संघका महासचिव राजवंशीले एनओसीले १२ औं सागलाई आधार बनाएर खेलाडी पठाउन भनेकाले सोहीअनुसार नाम पठाइएको जानकारी दिए।
ओलम्पिक जस्तो ठूलो प्रतियोगिताका लागि छनोट प्रतियोगिता नगरिनु खेलाडीमाथीको ठूलो अन्याय हो। प्रायः खेलाडीले ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागीता जनाएपछि मात्रै आफ्नो खेल जीवनले सार्थकता पाएको अनुभव गर्छन्। तर एनओसीकै कारण अनुभवी र क्षमतावान खेलाडीले सो अवसरका लागि प्रयास समेत गर्न पाएनन्।
एथलेटिक्सलाई नजिकबाट नियाली रहेकाहरु खुला छनोट प्रतियोगिता गर्ने हो भने संगिताभन्दा राम्रा खेलाडी धेरै निस्कने ठोकुवा गर्छन्। हरिको इभेन्टमा समेत अन्य धेरै खेलाडीले बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न सक्ने उनीहरुको दाबी छ। ‘दुई महिनाअघि मात्रै भएको छनोटमा चारपाँचजना खेलाडी संगिताभन्दा उत्कृष्ट निस्किएका थिए। अहिले पनि त्यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन।
उनीभन्दा राम्रा धेरै खेलाडी छन्’, एथलेटिक्सका एक बरिष्ठ प्राबिधिक भन्छन्, ‘हरिको इभेन्टमा पनि उनलाई बलियो टक्कर दिने धेरै खेलाडी छन् तर, छनोट प्रतियोगिता नै नहुनु बिडम्बना हो।’
यसैगरी आगामी जुन २ देखि ६ तारिखसम्म भियतनाममा आयोजना हुने एसियन जुनियर एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने खेलाडीको विषयलाई लिएर पनि चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ।
‘च्याम्पियनसिपमा तीन दर्जनभन्दा बढी स्पर्धा समावेश गरिएको छ तर, नेपालबाट भने एक सय र आठ सय मिटर दौड तथा ज्याभलिन थ्रोमा मात्र खेलाडी पठाउने तयारी हुँदैछ। यीनै तीन स्पर्धाबाट एक वा दुई खेलाडी पठाउने पक्का छ’, स्रोत भन्छ, ‘यही तीनवटा स्पर्धालाई आधार बनाएर शनिबार छनोट प्रतियोगिता गराइने भएको छ।’
एथलेटिक्स संघमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै महासचिव शुनिल राजबंशी असन्तुष्ट बनेका छन्। उनले सोही कारण देखाई दुई महिनाअघि राजिनामा दिएका थिए। हालै बसेको बोर्ड बैठकमा सबैले आग्रह गरेपछि उनी तत्कालका लागि काममा त फर्किएका छन् तर, परिस्थिती नसुध्रिए पद त्याग्ने पनि बताउँछन्।
‘हामी एथलेटिक्स खेललाई अघि बढाउन आएका हौं तर, यहाँ काम गर्ने वातावरण भएन। काम गर्ने भन्दा पनि असहयोग गर्ने बढि निस्किए। त्यसैले राजिनामा दिएको थिएँ’, महासचिव राजबंशीले भने, ‘तर अध्यक्षसहित अन्य साथीहरुले आग्रह गरेपछि राजिनामा दिने निर्णय अहिलेलाई स्थगित गरेको छु।’ उनले संघले छिट्टै कार्यक्रम ल्याउने र त्यो कार्यक्रमअनुसार काम नभए पदमा नबस्ने बताए छन्।
नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनः घाटा-नाफाको हिसाबकिताब नेपाली क्रिकेटको टर्निङ प्वाइन्ट बन्ला त आईसीसीको कदम ?
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई गरेको निलम्बनले समर्थकलाई निराश बनाएका बेला नेपाली टीमका कप्तान पारस खड्काले यसलाई ‘नयाँ सुरुवात’ को संज्ञा दिए ।
निलम्बन आफैंमा अप्रिय घटना हो । यसले एकातर्फ नेपाली क्रिकेटलाई अभिभावकविहीन बनाएको छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी पनि धुमिल गराएको छ ।
निलम्बनलाई लिएर सरोकारवालाहरु आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, तदर्थ समिति र निर्वाचित समितिहरुले निलम्बनको दोष एअर्कालाई लगाइरहेका छन् ।
तर, यसलाई ‘नयाँ सुरुवात’ का रुपमा लिनेहरुको जमात ठूलै छ । खासगरी क्रिकेट संघमा देखिएको लथालिंग अवस्था र वेथितीलाई लिएर धेरैमा निराशा थियो । अब यहि अवस्थामा नेपाली क्रिकेटले कुनै फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
त्यसैले यसलाई एउटा टर्निङ प्वाइन्ट मान्न सकिन्छ । उसो भए के यो निलम्बन नेपाल क्रिकेटको हितमा हुन सक्छ त ?
अमेरिकी मोडलको सम्भावना
क्यानमाथि प्रतिवन्ध लगाएको भोलिपल्ट आर्इसीसीले विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीप अन्तरगत नेपाल र नेदरल्याण्ड्सको खेल तालिका सार्वजनिक गर्‍यो । यसलाई आईसीसीले दिएको एउटा संकेतका रुपमा बुझ्नुपर्छ । त्यो संकेत के हो भने क्यानको निलम्बनपछि अब नेपाली क्रिकेटलाई आइसीसीले अमेरिकी मोडलमा चलाउनेछ ।
अमेरिकी क्रिकेट संघलाई निलम्बन गरेको उसले क्रिकेट टीमलाई भने आफ्नै निगरानीमा खेलाइरहेको छ । आईसीसीले अब नेपाली क्रिकेटलाई लतारेर त्यही मोडलमा लैजाने सम्भावना बढी छ । अमेरिकामा आईसीसीले आफ्नो प्रतिनिधि तोकेको छ र सरोकारबालाहरुको एउटा टिम बनाएको छ । त्यहाँ आईसीसीलाई कार्ययोजना बनाउन मात्रै ६ महिना लागेको थियो ।
तर, साउनमा नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्नुपर्ने तालिका भएकाले पनि नेपालका हकमा उसले यति ढिलाई नगर्ला । सम्भवतः अबको एक साताभित्र आईसीसीले प्रतिनिधि तोकेर नेपाल पठाउन सक्छ । र, उसले नेपालमा आएर सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
आईसीसी र उसका प्रतिनिधिले नेपाल आएर चाल्ने कदमलाई तत्कालीन निर्वाचित समिति, तदर्थ समिति र सरकारले कसरी लिन्छन् भन्ने प्रष्ट भइसकेकमो छैन । यदि उनीहरुले सहयोगी भूमिका खेले भने प्रक्रिया सहज रुपमा अघि बढ्ला, नभए थप कचिंगल आउन सक्छ ।
अदालतको फैसलाको औचित्य
क्यानको आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पेशी जेठ १९ लाई तोकिएको छ । सर्वोच्चको फैसला नपर्खिकन आईसीसीले निलम्बनको निर्णय लियो । यसको अर्थ अव सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो अर्थ नराख्न सक्छ ।
जितेको पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्नु स्वभाविक हुन्छ तर, आईसीसीले त्यसलाई मान्छ भन्न सकिन्न । उसले आफ्ना शर्तहरु पुरा गराउन खोज्नेछ । यस्तोमा नेपाली क्रिकेट थप विवादित हुने खतरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
आईसीसीले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्दा नेपाली क्रिकेट लाभान्वित हुन सक्ने भनेर खेलाडीहरु आशावादी देखिन्छन् । क्यानले क्रिकेट विकासमा सिन्को भाँच्न नसकेको अनुभव गरेकाले उनीहरु आर्इसीसीको कदमप्रति एक हदसम्म सकारात्मक भएका हुन् ।
हुन पनि क्यान अहिलेसम्म दैनिक प्रशासनिक काममै सिमित थियो । राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना हुन नसकेको दुई वर्ष भइसकेको छ । पूर्वाधारको अवस्था वर्षौंदेखि जहाँको त्यहीँ छ । खेलाडीहरुलाई एक्सपोजर दिने र करिअरको सुरक्षा गर्न ठोस पहल भएको छैन ।
पछिल्लो समय कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको क्यानले कार्यकारी अधिकृतसहित सबै कर्मचारीलाई पाँच महिनादेखि तलवसम्म खुवाएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नुअघि बन्द प्रशिक्षण गराउनेमै सिमित थियो क्यानको सक्रियता ।
यस्तोमा नेपाली क्रिकेट अब नेपालको हातबाट फुस्केर आईसीसीको पोल्टामा पुगेको छ । अब के नेपालमा आइसीसीकै तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना होलान् त ?
स्मरणीय के छ भने हालै सम्पन्न नेपाल र नमिबियाको खेल आईसीसी आफैंले गराएको थियो । एसिया डेभलपमेन्ट म्यानेजर बन्दुला वर्नापुरा आफैं झण्डै एक महिना नेपालमा बसेर खेल गराए । पिच निर्माणदेखि सबै काम आईसीसीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको थियो ।
आईसीसीकै अगुवाइमा काम भएको अवस्थामा भविष्यमा यसैगरी थप खेलहरु हुन सक्छन् । नेदरल्याण्ड र स्कटल्याण्डको टिम त्यहाँको अफ सिजनमा नेपाल आउन तयार छ । त्यस्तोमा नेपाल, नेदरल्याण्ड र स्कटल्याण्डबीच त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृखला हुनसक्छ ।
क्रिकेटमा राम्रो गरिरहेको अफगानिस्तान र हङकङ पनि नेपाल भ्रमणमा आउन लालायित देखिएका छन् । उनीहरुले पटक-पटक क्यानलाई प्रस्ताव राखेका पनि थिए । उनीहरुसँग खेल हुने सम्भावना पनि छ ।
राष्ट्रिय टीमका एक सदस्य आशावादी हुँदै भन्छन्, ‘अब कम्तिमा द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय खेलहरु हुन्छन् र हाम्रा खेलाडीहरुले निरन्तर खेल्ने मौका पाउँछन् ।’
यसका लागि बजेटको समस्या पनि छैन । किनकी आईसीसीले नेपाललाई दिने ९ लाख डलर आउन बाँकी नै छ भने एसीसीबाट आउने पैसा पनि बाँकी छ । अष्ट्रेलिया क्रिकेटले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको रकम पनि आईसीसीमार्फत नै आउने हो ।
तर दाग कसरी पखाल्ने ?
यसरी हेर्दा आईसीसीको हस्तक्षेपकारी कदमलाई पनि नेपालले अन्तराष्ट्रिय खेलहरु धेरै खेल्न पाउने सम्भावना सकारात्मक पाटो भयो । तर, नेपाल क्यान निलम्बनमा पर्दा नेपाली क्रिकेटमाथि नै दाग लागेको छ । यो दाग पखाल्न भोलिका दिनमा नेपालले निकै मेहनत गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक आइसीसीको अगुवाइमा काम भएको अवस्थामा क्रिकेटको घरेलु संरचना नै नरहने खतरा रहन्छ, जुन क्रिकेटको विकाका लागि अत्यावश्यक हो । तर, नेपालको घरेलु लिग आईसीसीको चासोको विषय होइन । उसले नेपालले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुअघि अभ्यास र द्वीपक्षीय सिरिजहरु मात्रै जारी राख्न सक्छ ।
नेपाललाई भारतले गोलको वर्षागरेपछि…
काठमाडौँः एएफसी चौध वर्षमुनि ९यु–१४० को छात्रा रिजनल फुटबल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत बुधबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग भारी अन्तरले पराजित भएको छ ।
ताजकिस्तानको एभिएटर स्टेडियममा भर्खरै सम्पन्न खेलमा नेपाल–भारत ९–० को भारी अन्तरले पराजित भएको हो ।
एकतर्फीय खेलमा भारतले खेल सुरु भएको पहिलो मिनेटमै अग्रता लिएको थियो । त्ससपछि नरोकिएको भारतले खेलको ११ औँ मिनेटमा दोस्रो गोल ग¥यो भने पुनः १३ औँ मिनेटमा अर्को गोल थप्यो ।
नेपालकी सरिता न्यौपानेले १८ औँ मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि नेपाल झन् निरास हुन पुग्यो ।
त्यस्तै, खेलको ३० औँ, ३९ औँ, ४४ औँ र ४५औँ मिनेटमा भारतले लगातार गोल गरेपछि थप निरास बनेर त्यसपछि सम्हालिन नसकेको नेपालले ६५ औँ मिनेटमा नवौँ गोल खायो ।
प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल शनिबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ । विभिन्न सात राष्ट्रले भाग लिएको उक्त प्रतियोगिताका सहभागी टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ, जसमा नेपाल समूह ‘बी’ मा परेको छ ।
नेपालको समूहमा भारत र बङ्गलादेश छन् । त्यसैगरी, समूह ‘ए’ मा भने आयोजक ताजकिस्तानसहित किर्गिस्तान, भुटान र इरान छन् । रासस
नेपालले भारतविरुद्ध गाड्यो विजयको झण्डा, नेपाल २–१ ले विजयी
काठमाडौं, ३ फागुन । साग फुटबल अन्तर्गत आजको भएको रोमाञ्चक खेलमा नेपालले भारतविरुद्ध २ गोलसहित विजय हासिल गरेको छ । भारतको गुहाटीमा भएको खेलमा नेपालले भारतविरुद्ध दुई गोलको सानदार जित दर्ता गराएको हो । खेलको सुरुवातमा भारतले नेपालविरुद्ध एक गोल प्रहार गरेको थियो । तर दोस्रो हाफमा नेपालले दश मिनटको फरकमा दुई गोल गरेपछि जित सहज भएको हो । नेपालको दोस्रो गोल भएपछि भारतीय खेलाडी नेपाली खेलाडीविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले नेपाली खेलाडीमाथि जथाभावी प्रहार गरेका थिए । – See
माल्दिभ्सविरुद्ध खेल नेपाललाई ४-३ को अग्रता
काठमाडौंः १२ औं साग अन्तर्गत गुहावाटीमा भइरहेको सेमिफाइनल खेललाई नेपालले ४–३ को अग्रता लिएको छ ।
नेपालले खेलको पहिलो हाफमा गरेको २ गोलको अग्रता दोस्रो हाफमा तोडेको माल्दिभ्सल फर्काउँदै खेललाई बराबरीमा ल्याएपछि खेल अतिरिक्त समयमा ३–२ को अग्रता लिएको थियो ।
तर अतिरिक्त समयको १२७ औं मिनेटमा माल्दिभ्सले आत्मघाती गोल उपहार दिएपछि खेल बराबरीमा ल्याएको हो । माल्दिभ्सले यसअघि खेलको ११५ औं मिनेटमा ३–२ को अग्रता लिएको थियो ।
निर्धारित समयमा २–२ गोल भएपछि खेल अतिरिक्त ३० मिनेटमा धकेलिएको थियो ।
नेपालका कमल श्रेष्ठले ६५ औं मिनेटमा रेडकार्ड पाउँदै १० खेलाडीमा सीमित भएर दबाबमा परेको नेपालविरुद्ध खेलको ८५ औं मिनेटमा माल्दिभ्सले गोल फर्काएको थियो ।
खेलको ६५ औं मिनेट नेपाली डी बक्समा माल्दिभ्सका खेलाडीलाई लडाएपछि उनले रेडकार्ड पाउँदै मैदान छाडेका थिए ।
खेलको १५ औं र ३६ औं मिनेटमा अन्जन विष्ट र नवयुग श्रेष्ठको गोलमा अग्रता लिएको नेपालले ५२ औं मिनेटमा गोल खान पुगेको थियो ।
६५ औं मिनेटमा कमलले रेडकार्ड पाएपछि नेपालले १० खेलाडीमा सीमित भएर खेलिरहेको छ ।
कमल बाहिरिएपछि दबाबमा परेको नेपालले खेल बराबरी भएपछि बंगबन्धुमा निकालेको नतिजा कायम राख्ने गरी खेल्नुपर्ने भएको छ ।